Dahaarka dahaarka leh ee laba-dhinac leh oo la daboolay |
Dahaarka dahaarka leh ee soo wajahan ayaa inta badan loo adeegsadaa in lagu xadido kaxaynta uumiga iyada oo hadafka ugu dambeeya laga leeyahay ka hortagga uumiga. Qalabka dahaarka leh waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo uumiga uumiga ah ee u dhexeeya hawada jawiga ee ka baxsan dahaarka iyo dusha tuubada, ka dib ka hortagga uumiga oo ka samaysma dusha dusheeda ama dusha dahaarka.
Dahaarka laba-geesoodka ah, oo leh natiijooyin ka-hortag wanaagsan, awoodda uumiga uumiga oo sarreeya iyo guryaha dahaarka dhawaaqa.
Waxaa loo adeegsaday dib-u-xiridda qalabka kala duwan ee dahaarka, iyo sida dahaarka kuleylka iyo lakabka uumiga uumiga ee marinnada hawada ee dhismayaasha bir-dhiska ama nidaamyada qaboojiyaha dhexe. Waxa kale oo laga yaabaa in loo adeegsado sidii wax kulaylka dhawaaqa iyo kulaylka dhismayaasha dhaadheer, tiyaatarada iyo hoolalka riwaayada, iwm.
Wixii dhogor dhalada ah, dhogor dhagaxa ah, dhogor macdan ah iyo qalabka kale ee kuleylka kuleylka, dahaarka kuleylka-daboolidda iyo lakabka uumiga uumiga, suufka, iyo suufka dahaarka kuleylka kuleylka ee khadka tooska ah, si loola kulmo mareenka HVAC, tubbada biyaha qabow iyo diirran Adiabatic iyo uumiga bamer baahiyaha iyo shuruudaha dahaarka ee dhismaha birta.
Waxaa jira khadad kala duwan oo loogu talagalay xaaladaha isticmaalka kala duwan.
7micAluminumfoil/PE/8*12/100cm2, Mesh-galaas saddex-dhinac ah/60gKraft/PE/7micAluminum aluminium
Miisaan khafiif ah, mesh galaas-galaas ah oo saddex gees leh, dahaadh ka tarjumaya laba-dhinac, oo leh natiijooyin ka-hortag wanaagsan, awood uumeysiga uumiga oo sarreeya iyo sifooyinka dahaarka dhawaaqa.
7mic Aluminium-bireed/ FR Glue/ 12.5x12.5mm laba-jid mesh galaas/ Kraft Dabiiciga ah: 60gsm/ FR Glue/ 7mic Aluminium-bireed
Miisaan khafiif ah, mesh-galaas laba-dhinac ah, dahaadh ka tarjumaya laba-dhinac, oo leh natiijooyin ka-hortag wanaagsan, awoodda uumiga uumiga sare leh iyo guryaha dahaarka dhawaaqa, iyo sidoo kale xoogaa dib-u-dhac ah.
Haddii aad u baahato alaabtayada, fadlan wac shirkaddayada, waxaan ku siin doonnaa xalalka cajaladda waqtigeeda, oo kaa caawin doona inaad xalliso dhibaatada.
Hel MEIYUAN waa si aad u hesho xalka cajaladda, nala soo xiriir!
Hore: Bireed-PE-xidhkii dahaarka dahaarka bireed
Xiga: gabay dahaarka dahaarka bireed dahaadhay
Sidee u Kululaan Kartaa Cajaladda Fiilooyinka Aluminiumka, Sharooto, Intertape Polymer Group Aluminium -bireed, Fiilooyinka Aluminium ee Hal-dhinac leh, Aluminium -bireed -Muraayadda Muraayadda Muraayadda, Wejiga Labaad ee Xoojiya Aluminium-ka Wajahaya,